प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले लोकेन्द्र बिष्टलार्इ 'तँ बाहिर गर्इहाल' भन्दै लखेटेपछि हंंगामा - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
६ कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:४१ October 23, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालले साे पार्टीका एक बरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्रीलार्इ अपशब्द बाेल्दै धकेलेर काेठाबाट बाहिर पठाएकाे खुलासा भएकाे छ । पटक पटक विवादमा अाइरहने प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले साेही पार्टीका नेता लाेकेन्द्र बिष्ट मगरमाथि यस्ताे दुर्व्यवहार गरेका हुन् । कहिले बहुबिबाह त कहिले नेता कार्यकर्तालाई तथानाम गाली गरेर चर्चामा आउने प्रकाशले नेता बिष्टलार्इ “तँ गइहाल” भन्दै धकेलेकाे घटना बाहिर अाएपछि उनकाे फेरि चर्चा सुरु भएकाे छ । प्रकाश केही बर्ष अघि पारस शाह थाईल्याण्डमा बिरामी परेका बेला पारस शाहको निधन भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि विवादमा अाएका थिए ।
प्रचण्डलार्इ भेट्न गएका बेला माअाेवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लाेकेन्द्र बिष्ट मगरलार्इ प्रकाशले ‘तँ बाहिर जा’ भन्दै धेकेलेकाे स्वयम बिष्टले नै खुलासा गरेका हुन् । जनयुद्धकालमा रुकुम जेलमा लामाे समय बसेका बिष्ट पूर्वमन्त्री समेत हुन् । करिब ४० बर्षदेखि प्रचण्डसँगै रहेका बिष्टलार्इ प्रचण्ड पुत्रले बालवाटारबाट धकेलेरै बाहिर पठाएको भन्ने खुलासा भएपछि सबैतिर यसबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएकाे छ । बिष्टले याे कुरा एक अनलार्इनसँगकाे अन्तरवार्ताका क्रममा खुलासा गरेका हुन् ।
अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रकाश दाहालबाट पीडित लाेकेन्द्र बिष्ट मगरले भनेकाे कुरा जस्ताकाे तस्तै :
‘प्रकाश दाहाल बाबुका कारण पनि होला अलिकति घमण्डी छन् । चर्को बोल्छन् । एउटा घटना छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका देला उनलाई भेट्न मैले प्रकाशलाई फोन गरेँ, उठेन । सीधै बालुवाटार भेट्न गएँ । प्रकाश आएनन् । भेटघाट दिनेजस्तो अवस्था भएन । म आफैँ अध्यक्षलाई भेट्न कस्सिएँ र अघि बढेँ । प्रकाशले थाहा पाएछन् र बीच बाटोमै बाटो छेक्न आए । मैले भने, ‘म अध्यक्षलाई भेट्न आएको हुँ ।’ चर्को स्वरमा उनले भने, ‘तपाईं तल गएर बस्नुस् । नसोधेरै आउने, फोन नगरी आउने ? मैले भने, ‘कसलाई सोधेर आउने ? फोन गर्दा फोन उठ्छ र तिम्रो ? म अध्यक्षको कार्यालय सदस्य हुँ ।